Vaovao - Ny mampiavaka ny vatan'ny PVC mihantona amin'ny rindrina PVC
Ny toetra mampiavaka ny tabilao mihantona ety ivelany PVC
Ny tabilao mihantona ivelany dia mety amin'ny fanaingoana ny rindrina sy ny rindrina anatiny ary ivelany. Ny fananana ara-batana sy simika dia ireo an'ny ravina PVC. Ireo tondro ara-teknika mifandraika dia manondro ny GB / T88 Ny fananana ara-batana sy simika dia ireo an'ny takelaka PVC. Ireo tondro ara-teknika mifandraika dia manondro ny GB / T8814-1998, QB / T2133-1995, Q / DAB.001-2003.
Fampidirana endri-javatra vokatra
1. Haingo tsara. Noho ny lamina isan-karazany toy ny voan-kazo fakan-tahaka amin'ny endrik'ireo takelaka mihantona, dia maro karazana ny loko, ary mazava sy mamirapiratra ny tsipika. Izy io dia manana fahatsapana maoderina amin'ny fomba eropeana sy amerikanina malaza. Izy io dia mety indrindra ho an'ny villa, trano sy tranobe taloha.
2. Fampiharana marobe Ity vokatra ity dia mahatohitra hatsiaka mafy sy hafanana, maharitra, anti-ultraviolet ary anti-antitra. Ny fanoherana ny harafesin'ny asidra, alkaly, sira ary ny ampahany mifanohitra aminy dia tsara indrindra. Mora diovina (azo kosehina amin'ny famafazana rano), tsy misy fikojakojana
3. Fanatanterahana afo tsara. Ity vokatra ity dia misy kaonty oksizenina 40, tsy mijanona amin'ny lelafo ary mamono tena amin'ny afo, ary mahafeno ny fenitra fiarovana nasionaly B1 (GB-T8627-99).
4. Mitsitsy angovo avo. Tena mety ny mametraka fitaovana polystyrene foam amin'ny sosona anatiny amin'ny tabilao mihantona, mba ho tsara kokoa ny fiarovana ny hafanana ivelany. Ny akora vita amin'ny polystyrene dia toa mametraka "landihazo" amin'ny trano, raha ny rindrina mihantona rindrina ivelany kosa dia ny "palitao", mafana ny trano amin'ny ririnina.
5. Fametrahana mora, vidiny ambany, rafitra mandroso, mora apetraka, matanjaka ary azo antoka. Villa 200 metatra toradroa azo apetraka ao anatin'ny iray andro. Ny tetik'asa fanaovana rindrina mihantona ivelany dia rindrambaiko haingon-trano ivelany sy fitsitsiana mpiasa hatreto. Raha misy fahasimbana ampahany dia mila soloina fotsiny ilay takelaka mihantona vaovao, izay tsotra sy haingana ary mora tazonina.
6. Ny fiainana serivisy vokatra ankapobeny dia maharitra 25 taona farafahakeliny, ary ny vokatra roa sosona co-extrusion miaraka amin'ny velaran'ny vokatra amerikana GE (General Electric) ASA dia manana fiainam-panompoana mihoatra ny 30 taona.
7. Fiarovana tontolo iainana tsara. Ny vokatra dia tsy miteraka fahalotoan'ny tontolo iainana amin'ny fizotry ny famokarana na amin'ny fampiharana injeniera. Izy io dia haingo fiarovana tontolo iainana mety indrindra fa tsy fanodinana.
8. Tombontsoa feno azo raisina Ny fametrahana ny takelaka mihantona rindrina ety ivelany dia afaka hanafohezana ny vanim-potoana fananganana. Indrindra amin'ny tetikasa fanavaozana ny endrik'ilay trano taloha, azo amboarina mivantana izy io nefa tsy mamafa ny endrika tany am-boalohany, manafoana ny fandotoana ny rindrina tany am-boalohany tamin'ny fanesorana ny rindrina tany am-boalohany, mampihena ny fanesorana ny fako, ary manafaingana izaitsizy. Vita ny fandrosoana . Noho ny fanoloana ny vanim-potoana fananganana sy ny fanafoanana ny fanesorana ny fako dia nihena ihany koa ny vidin'ny tetikasa.